- ဒီမိုကရေစီ ရွှေရုပ်ကလေးနဲ့ မုသားနဲ့ သစ္စာစကား
အနှစ် ၂၀ လိုအပ်ခဲ့ပါသလား၊။
- မရဲတရဲ မေးချင်တယ်။
ပညာရေးအဆင့်မြင့် သုံးထားဖြစ်ရဲ့လား ?
- ထမင်းဝိုင်းဖွဲ့ဆုံ ဂီတလေးနားထောင်ယုံနဲ့
ပြည်ထောင်စုသွေးစည်း ညီညွတ်ရေးရှိပြီတဲ့လား ?
- ဘာကိုဆိုလိုပါသလဲ ..
ဥပဒေကဲ့သို့ အာဏာတည်သောအမိန့် ဆိုတာ
အာဏာလား ? ဥပဒေလား ? လုံးချစကားလား ?
နေပြည်တော်ဆိုတာ နအဖရဲ့ ပျက်သုန်းမြေ။ ။
(ရေးသားသီဖွဲ့ သူ - ကဒေါင်းသစ်)။